स्वास्थ्य/ जीबन शैली Archives - Mero Khabar Nepal
मधुमेह अर्थात सुगर रोग शरिरमा गुलियोको मात्रा बढि भएपछि लाग्ने गर्छ । अब चिन्ता नलिनुहोस् घरमा नै सजिलैसँग तपाईँको सुगर रोग ठिक पार्न सक्नुहुन्छ । यदि गुलियो चिजहरूको सेवनका कारण तपाईलाई मधुमेहले पीडित बनाएको हो भने तपाईले बेलको पात प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ । यस रोगबाट छुटकारा पाउन तपाईले १५ वटा बेलका पातलाई ३० ग्राम पानीमा मिलाएर पिस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि ३ या ४ कालो मरिचको दालाई धुलो हुने गरी पिसेर पिसिएको बेलको पातसँग मिश्रण बनाई त्यसलाई एउटा सफा कपडाले छानेर आएको रसलाई सेवन गर्नुहोस् । यसप्रकारले बेलको पात पिसेर पिउँनाले तपाई केही महिनामा नै यो रोगबाट मुक्त हुन सक्नुहुनेछ । त्यसैगरी बेलपत्रलाई अन्य तरिकाले प्रयोग गरेर पनि सेवन गर्न सकिन्छ। तपाईले ६ वा ७ वटा बेलको पात, कालो मरिचको दाना, तुलसीको पात र निमको पातलाई एकै ठाउँमा राखेर एकदमै मसिनो हुने गरि मजाले पिसेर एक गिलास पानीसँग
अचेल युवापुस्तामा दाह्री पाल्ने फेसन नै चलेको छ । स्कूल कलेज पढ्ने टिनएजर हुन् वा अफिसमा काम गर्ने कर्मचारी नै किन नहुन्, धेरैजसो पुरुषहरुले अचेल दाह्री पालेकै देखिन्छ । दाह्री पाल्नुका छुट्टै फाइदा पनि छन् जो उनीहरु स्वयंलाई थाहा नहुन पनि सक्छ । हालै गरिएको एक अध्ययनले दाह्री पाल्दा धेरै प्राणघातक रोगबाट मुक्त हुन सकिने तथ्य सार्वजनिक भएको छ । सूर्यबाट आउने परावैजनिक किरणलाई दाह्रीले सिधै अनुहारमा पर्न नदिई रोक्ने गर्दछ । त्यस्तो हानीकारक किरणलाई छेक्ने भएकाले दाह्रीले अनुहारको चमकमा क्षति हुन दिँदैन । त्यस्तै, एलर्जीको समस्या छ भने पनि दाह्रीले सहयोग गर्ने अध्यनले देखाएको छ । यसले एलर्जेनलाई रोकेर एलर्जी हुन दिँदैन । दाह्रीले धेरैजसो घातक रोग लाग्नबाट जोगाउन सहयोग गर्दछ । सूर्यको प्रत्यक्ष किरणबाट अनुहार जोगिने भएकाले कुनै दाग, धब्बा आदि समस्या पनि कम हुन्छ ।
काठमाण्डौ । व्यस्त जीवनशैंलीले मानिसलाई अल्छी बनाएको छ । मानिसको अल्छीपनासँगैं मोटोपन पनि एक प्रमुख समस्याको रुपमा द्खिने गर्दछ । आज हामी तपाईलाई असामान्य तरिकाले बढ्दैं गरेको मोटोपनका बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौं ।के तपाईलाई थाहा छ बन्दा काउलीको सुपले एक हप्तामा शरीरको अनावश्यक बोसोलाई पगालेर तौल घटाउँछ ? छैन भने आज हामी बन्दाको झोल सेवन गरेर जीवनमा कसरी परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने जानकारी गराउँदै छौं ।शरीरको अनावश्यक तौल घटाउने यो अचुक बिधिको विशेषता भनेको उपचारको अवधि भर तपाईले जति बेला भोक लाग्छ आफुले चाहे जति बन्दाको सुप खान सक्नुहुन्छ । जति धेरै यो सुप सेवन गर्नु हुन्छ त्यति नै मात्रामा शरीरको क्यालोरी घट्छ किनकि यो सुपमा क्यालोरीको मात्रा शुन्य बराबर हुन्छ । वास्तवमा यो सुपले भोजनको काम गर्छ जसमा क्यालोरीको मात्रा शुन्य बराबर हुन्छ । अनि यसका कारण तपाईको मेटाबोलिज्ममा बृद्धि ह
काठमाण्डौमा जन्मेर यहीँ हुर्केकी ऋचा धमलालाई सानोमा कसैले ठूलो भएपछि के बन्छौ भनेर सोध्दा भन्नुहुन्थ्यो ‘शिक्षिका बन्छु ।’ केही समयपछि ऋचालाई लाग्थ्यो शिक्षिका हैन, डाक्टर बन्छु । त्यसपछिको उहाँको सपना थियो ठूलो भएपछि वकिल बन्ने । तर उहाँले रोज्नुभयो ‘धोबी’ अर्थात लुगा धुने काम । शिक्षिका, डाक्टर र वकिल पेशालाई आफ्नो सपना मान्ने ऋचाका वर्षहरु फेरिएसँगै लक्ष्यहरु पनि फेरिंदै गए । अस्ट्रेलियामा चार वर्षे बीएससी नर्सिङ गरेर नेपाल फर्किएकी ऋचाको हिजोआज लुगा धुने काम नै सपना र बिपना भएको छ । धेरै युवाको सपना हिजोआज अस्ट्रेलिया र अमेरिका हुन्छ । त्यही ठाउँ जानका लागि मरिहत्ते गर्छन् ।तर त्यही देशमा पुगेर ‘स्कोप’ पनि राम्रो भएको विषय बीएससी नर्सिङ गरेकी ऋचाको मन अडिएन । पढाइअनुसारकै काम अस्ट्रेलियामै बसेर गरेको भए कमाइ राम्रो हुन्थ्यो । जिन्दगीले अर्कै लय समातिसकेको हुन्थ्यो होला । तर सुख र खु
पछिल्लो समय मानिसहरु अनुहारमा आएका अनावश्यक दाग धब्बा अनि शरीरमा आएका मुसाबाट छुटकारा पाउनका लागि अनेक प्रकारका ट्रीटमेन्ट क्रिम देखि लिएर थुप्रै खर्च गरिरहेका छन। तर पनि यसबाट अपेक्षाकृत परिणाम नमिल्दा उनीहरुमा निराशाको भाव पैदा भइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामी शरीरमा आएका मुसाबाट सजिलै छुटकारा पाउने उपायका बारेमा बताउन जादै छौ जसको प्रयोगले तपाईलाई पक्कै पनि यसको समस्याबाट छुटकारा पाउन सजिलो हुन सक्छ। आउनुहोस ; मुसा ‘ह्युमन प्यापिलो’ नामक भाइरसका कारणले हाम्रो शरीरमा आउने छ। यो पिगमेन्ट कोशिकाको समुह हो। मुसा देख्नमा सानो अनि कालो रंगको हुन्छ। यसको समयमा नै उपचार नगरेको खण्डमा क्यान्सर हुने खतरा हुन्छ त्यसैले आज हामी आयुर्वेदिक तरिकाले केहि दिनमा नै शरीरको मुसादेखि मुक्ति पाउने उपायको बारेमा बताउदै छौं आउनुहोस केराको बोक्रा केराको बोक्रामा पाइने अक्सिकरण रोधी नामक तत्वले
डा.नुतन शर्मा- महिनावारी हुने बेलामा धेरै पेट दुख्ने गर्छ। महिनावारीबारे आवश्यक ज्ञान नहुँदा किशोरीले असजिलो महशुस गर्नुका साथै अप्ठ्यारो अवस्थाको समेत सामना गर्नुपरेको हुन्छ। प्रायःकिशोरीहरूमा १३–१४ वर्षदेखि १७–१८ वर्षसम्मको समयमा महिनावारी नियमित हुने गरेको पाइँदैन। महिनावारीको समयमा कहिले– कसैलाई धेरै रक्तस्राव भइरहेको हुन्छ भने कसैलाई कम रक्तस्राव हुने गर्छ। तर, यो सामान्य प्रक्रिया हो। झण्डै चालिस प्रतिशत किशोरीमा यस्तो समस्या देखापर्छ। सुरूमा महिनावारी हुने बेलामा किशोरी अवस्थामा डिम्बाशयदेखि मष्तिस्कसम्मको पहुँच पूर्णरूपमा विकास भएको हुँदैन। त्यसले गर्दा महिनावारीका बेला विभिन्न समस्या आउने गर्छ। कतिपय आमाहरूले आफ्ना छोरी लिएर आउनुहुन्छ चार महिना भयो महिनावारी भएको छैन अनि कतिपय आउनुहुन्छ एक महिनादेखि रक्तस्राव भइरहेको छ भनेर। यदि महिनावारी लामो समयसम्म भएन अथवा लगातार पाँच
पानी हाम्रो स्वास्थ्यको लागि अति आवश्यक तरल पदार्थ हो । पानीको अभावमा हामी हाम्रो जिन्दगीको कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं किनकि हाम्रो शरीर मा ७०% पानी नै हुन्छ । पानीले हाम्रो शरीरलाई सफा राख्न मद्धत गर्छ । हाम्रो शरीर भित्र रहेका विभिन्न विषाक्त पदार्थलाई पानीले बाहिर निकाल्न मद्धत गर्छ । पानीको अभाव हुनाले हामीलाई विभिन्न खालका रोगहरुले सताउने गर्छ । त्यसैले हामीले हाम्रो शरीरमा पानीको मात्रामा कमि आउन दिन हुदैन । यदि पानीको मात्रमा कमी आएको थाहा पाइयो भने प्रशस्त मात्रामा पानी पिउनु पर्छ । शरीरमा पानीको मात्रामा कमी आएको थाहा पाउने केहि लक्षणहरु यस्ता छन् : १) टाउको साह्रो गरी दुख्छ : टाउको दुखिरहेको छ, तर के कारणले दुखेको हो भन्ने थाहा हुँदैन त्यसका कारण शरीरमा पानी कम भएर हो । त्यसरी टाउको गह्रौँ भएर दुखेमा तत्काल पानी पिउने र १० मिनेटको फरकमा थोरै केही खाने । त्यसले तत्काल द
जीवनमा कसरी खुसी रहने? यस्ता छन् १४ उपाय
खुसी रहने तरिका सबैका लागि एउटै नहुन सक्छन्। कोही शान्त वातावरणमा रमाउँदा खुसी होलान् भने कोही आफ्नो मिल्ने साथीहरुसँग समय बिताउन पाउँदा खुसी होलान्। र, कोही आफ्नो सपनालाई पछ्याउँदै स्वतन्त्र रुपमा अगाडि बढ्नुलाई खुसी मान्लान्। जे जस्तो भए पनि खुसी रहनु ठूलो कुरा हो। खुसीले मानिसलाई आत्मसन्तुष्टि दिन्छ। तपाईंलाई कसरी खुसी रहने भनेर जिज्ञासा छ भने केही उपायहरु अपनाउन सक्नुहुन्छ। राम्रो बानीले खुसी रहन मद्दत गर्छ। त्यसो भए आफ्नो बानीमा परिवर्तन किन नगर्ने त ? सकारात्मक बानीलाई आफ्नो तालिकामा समावेश गर्नुस्। खुसी हुन सबैका आआफ्ना तरिका भए पनि उल्लेखित केही तरिकाहरु काम लाग्न सक्छन्। मुस्कुराउनुस् हामी खुसी हुँदा हाँस्ने गर्छौँ। हामी जब खुसी हुन्छौँ तब हाँस्छौँ। मुस्कुराउनु किन राम्रो हो भने यसले दिमागबाट डोपामिन नामक हार्मोन रिलिज गर्छ, जसले गर्दा हामी खुसी हुन्छौँ। हाँसोको मतलब बना
घुडा, हाड जोर्नीहरु दुख्ने समस्या छ सामाधानका उपाए बारे डाक्टर सापका सुझाव सहित पढ्नुहोस
बिहान उठ्दा तपाईको घुँडा दुख्छ ? हिँड्न गाह्रो हुन्छ ? दुखाइको महसुस हुने गर्छ भने सजग हुनुहोस्। बाथरोगको लक्षण हुन सक्छ। वरिष्ठ बाथरोग विशेषज्ञ डा. विनित वैद्य भन्छन्, ‘बाथरोग लागेका व्यक्तिको जोर्नी बिहानपख दुख्ने गर्छ। कक्रक्क पार्छ। सुन्निन्छ।’ उनले जोर्नी कक्रक्क पार्दै जाँदा पछि बांगिने जोखिम पनि हुने बताए। उनका अनुसार बिहान औंला सुन्निने र घाम लागेपछि विस्तारै बस्दै जान्छ। कुनै पनि मुलुकको कुल जनसंख्याको १० प्रतिशतलाई बाथरोग हुने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को अनुमान छ। अहिले मुलुकमा ३० लाख बाथरोगका बिरामी भएको चिकित्सक बताउँछन्। जसमध्ये एक लाखभन्दा कम बिरामीले उपचार पाएको डा. वैद्य बताउँछन्। बाथरोग विशेषज्ञ राजधानीमै सीमित रहेका कारण दूरदराजका धेरैजसो बिरामी झारफुकको भरमा बस्दा रोगले जटिल रुप लिने गरेको छ। केही वर्ष अघिसम्म बाथरोगको जाँच एवं उपचारका लागि भारत जानुपर्ने ब